2019 Global Fire power စစ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် မြန်မာ့တပ်မ​တော်​တိုးတက်​မှု – Lat Khat Than
2019 Global Fire power စစ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် မြန်မာ့တပ်မ​တော်​တိုးတက်​မှု
သိပ်​မကြာ​သေးခင်​ကပဲ နိုင်​ငံတကာစစ်​တပ်​​တွေရဲ့ အဆင့်​​တွေ သတ်​မှတ်​​ပေးတဲ့ global fire powerက​နေ ၂၀၁၉ခုနှစ်​အတွက်​ မြန်​မာ့တပ်​​မတော်​ရဲ့ အဆင့်​နဲ့အင်​အားကို ​​ ကြေညာထားပါတယ်​။မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ဟာ နိုင်​​​ငံ​ပေါင်း ၁၃၇နို င်​ငံမှာ အဆင့်​ ၃၇(​နာက်တိုး၁၀နိုင်​ငံ)နဲ့ရပ်​တည်​ပြီး အာဆီယံအဆင့်​မှာ အဆင့်​၎နဲ့ ရပ်​တည်​​နေပါတယ်​။မြန်​မာအထက်​မှာ အင်​ဒိုနီးရှား ၊ ဗီယက်​နမ်​ ၊ ထိုင်းတို့က အသီးသီး ရပ်​တည်​လျက်​ရှိ​နေပါတယ်​။
ကဲ အရင်​ဆုံး GFPရဲ့တွက်​ချက်​ပုံကြည့်​ရ​အောင်​-
GFPက စစ်​တမ်းထုတ်​တွက်​ချက်​တဲ့ ​နေရာမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့လူဦး​ရေ၊ လက်​နက်​အင်​အား၊ ​ငွေ​ကြေးအင်​အား၊ ​​ကျော​ထောက်​​နောက်​ခံအင်​အား၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်​၊ ပထဝီသွင်​ပြင်​အ​နေအထား စတာ​တွေအားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်​ တွက်​ချက်​ပြီး အဆင့်​တစ်​ခုကို ထုတ်​ပြန်​ပါတယ်​။
​​​လေ အတွင်း အသုံးပြု​နေတဲ့ လက်​နက်​ကြီး/ငယ်​ ယာဉ်​ကြီး/ငယ် စသည်ဖြင့် အကုန်လုံးပါဝင်မယ်။
ကြည်းတပ်​မှာဆိုရင်​ တင့်​(ပင်​မတိုက်​ပွဲဝင်​တင့်​ပါဝင်​ပြီး) အ​ပေါ့စားတင့်​၊တင့်​ဖျက်​ယာဉ်​များ၊သံချပ်​ကာယဉ်​များ (APC, IFV, MRAPs, Armored Car, Rocket Projector)​တွေပါမယ်။
​ရေတပ်​မှာဆိုရင်​ ​လေယာဉ်​တင်​​တွေ (Helicopter Carrierအပါအဝင်​) ၊​ရေငုတ်​သ​ဘောင်္​တွေ(ဒီဇယ်​သုံး၊ လျပ်​စစ်​သုံး၊နူကလီးယားစွမ်းအင်​သုံးမခွဲခြားဘူး)၊ ဖရီးဂိတ်​(FFG)၊
Destroyer(DDG)၊ကော်​ဗတ်​(corvettes)၊ မိုင်းရှင်းယာဉ်​​တွေ ကင်းလှည့်​ယာဉ်​စတာ​တွေပါမယ်။
​လေတပ်​မှာဆိုရင်​ ကြားဖြတ်​တိုက်​ခိုက်​​ရေးလေယာဉ်​၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ် (bomber​)တွေ၊
သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးလေယာဉ်​​တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်(chopper)​တွေ၊ ​လေ့ကျင့်​​ရေးလေယာဉ်​​တွေပါရှိမယ်။(UAV​တွေထည့်​သွင်းတွက်​ချက်​ခြင်းမရှိပါ)
​သဘာဝရင်းမြစ်​မှာ လောင်စာဆီကို အဓိကဦးစား​ပေးပြီးတွက်​ထားတယ်​။
အ​ကြောင်းက စစ်​ပွဲ တစ်​ပွဲမှာ စက်​သုံးဆီက အသက်​​သွေး​ကြောဖြစ်​​နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်​။ထုတ်​တဲ့ အ​ရေအတွက်​၊ သုံးစွဲမှုပမာဏ​တွေ၊ထုတ်​လုပ်​နိုင်​တဲ့မြေ​အောက်​ရှိ ပမာဏ ၊ သို​လှောင်​ထားမှု​​တွေအ​ပေါ်မှာ တွက်​ချက်​ရပါမယ်။
​ကျော​ထောက်​​နောက်​ခံ အင်​အားမှာဆိုလည်း အလုပ်​သမား၊ ကုန်​သွယ်​ဖက်​နိုင်​ငံ​တွေ၊ပင်​လယ်​ဆိပ်​ကမ်း​တွေ၊လမ်းပန်းဆက်​သွယ်​​ရေးစတာ​တွေပါဝင်မယ်။
​​ငွေ​ကြေး ဘဏ္ဍာ​ရေး မှာဆိုလည်း ကာကွယ်​​ရေးစစ်​သုံးစားရိတ်၊နိုင်​ငံခြားဝင်​​ငွေလဲလှယ်​နှုန်းစတာ​တွေပါဝင်​မယ်။
ပထဝီအ​နေအထားမှာဆိုလည်း ​ရေပိုင်​နက်​ ၊ ကမ်းရိုးတန်းအရှည်​၊ နိုင်​ငံရဲ့အကျယ်​အဝန်းစတာ​တွေပါရှိမယ်။
​နောက်​တစ်​ခုအ​နေနြဲ့ ကို​ပြောထားချင်​တာက GFPက အရည်​အ​သွေးထက်​ အ​ရေအတွက်​ကို ဦးစား​ပေးတွက်​ချက်​ထားတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ-လက်​နက်​ပိုင်း​ပေါ့ ဘယ်​နိုင်​ငံက ထုတ်​တဲ့ဟာက ဘယ်​နိုင်​ငံကဟာထက်​ပို​ကောင်းတယ်​ system မြင့်​တယ်​ ဒါ့​ကြောင့်​ rankပို​ပေးတယ်​မဟုတ်​ဘူး Roleတူရင်အမှတ်​​အတူတူပဲ။ဒါက​တော့ စာဖတ်သူ​ကိုယ်​တိုင်​စဉ်းစားရမှာ​ပေါ့​လေ။ပြီး​တော့ Nuclear ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့နိုင်​ငံ​တွေ ​နေတိုးအုပ်​စု​တွေလို အဖွဲ့ဝင်​ထားတဲ့နိုင်​ငံ​တွေကို rankပို​ပေးတယ်​။
နိုင်​ငံတစ်​နိုင်​ငံရဲ့တိုးတက်​မှုနှုန်းကို ညွှန်ကိန်း​(power index)
​တွေနဲ့​ဖော်​ပြပြီး ၀.၀၀၀၀ဟာ ပြီးပြည့်​စုံတဲ့ power indexပါ။နှစ်​တစ်​နှစ်​မှာ တိုးတက်​မှု ​ကောင်းရင်​ အဆင့်​​ကောင်းရင်​ green arrow , ကျရင်​ Red arrow, နဂိုတိုင်းဆိုရင်​​တော့ Double arrow နဲ့ပြထားတယ်​။
ယခုလက်​ရှိ Global military ​Rankမှာ ထိပ်​ဆုံးရပ်​တည်​​နေတဲ့Top -5နိုင်ငံက​တော့
1.​USA(power index 0.0615/0.0000)
2.Russia (power index0.0639/0.0000)
2.Vietnam (PwrIndx: 0.3988 /0.0000)
3.Thailand (PwrIndx: 0.4302 /0.0000)
4.Myanmar( PwrIndx: 0.6162/0.0000) 5.Malaysia (PwrIndx: 0.6523/0.0000) 6.Singapore (PwrIndx: 0.8161 7/0.0000)
7.Philippines( PwrIndx: 0.8862/0.0000) 8.Cambodia( PwrIndx: 1.8765/0.0000)
9.Laos (PwrIndx: 2.7113/0.0000)စသဖြင့်​ အသီးသီးရပ်​တည်​​နေပါတယ်​။
မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ဟာ Global rankအ​နေနဲ့ 37မှာ ရပ်​တည်​​နေပြီး အာဆီယံ​ဒေသတွင်းမှာ rank4နဲ့ရပ်​လျက်​ရှိပါတယ်​ ။
ညွှန်းကိန်း pwrIndxအ​နေနဲ့ အထက်​ကပြထားတဲ့ အတိုင်း 0.6162/0.0000ဆိုပြီးပြထားလို့ တိုးတက်​မှုနှုန်းက ကျဆင်း​နေပြီး red arrow ပြထားပါတယ်​။
မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ရဲ့ military power အ​သေးစိတ်​က​တော့
5.စစ်​မှုထမ်း​ပေါင်း: 406,000 (၄သိန်း​ကျော်​)
6.လက်​ရှိစစ်​မှုထမ်းဦး​ရေ: 406,000 (၄သိန်း​ကျော်​)
​လေတပ်​ရဲ့ Total Air power အ​နေနဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်​137မှာ 40နဲ့ရပ်​တည်​​နေပါတယ်​။
1.TOTAL AIRCRAFT STRENGTH: 276 (ranked 40 of 137)
2. FIGHTERS: 59 (ranked 35 of 137)
3. ATTACK: 80 (ranked 32 of 137)
4.TRANSPORTS: 25 (ranked 30 of 137)
5.SmallTRAINERS: 80 (ranked 33 of 137)
6.TOTAL HELICOPTER STRENGTH: 86 (ranked 44
7.ATTACK HELICOPTERS:9(ranked 35 of 137)ဖြစ်​​နေပြီး​လေတပ်​မှာ တိုးတက်​မှုမြင့်​တက်​လာတာကို​တွေ့ရပါတယ်​။
1.COMBAT TANKS: 434 (ranked 41 of 137)
2. ARMORED FIGHTING VEHICLES: 1,300 (ranked 47 of 137)
3. SELF-PROPELLED ARTILLERY: 108 (ranked 34 of 137)
4.TOWED ARTILLERY: 1,582 (ranked 11 of 137)
5. ROCKET PROJECTORS: 114 (ranked 31 of 137)
ကြည်းတပ်​မှာဆိုလည်း အ​မြောက်​တပ်​ဟာ အဆင့်​​ကောင်း​နေရာမှာရပ်​တည်​လျပ်​ရှိပြီး ကျန်​တဲ့ အပိုင်း​တွေမှာတိုးတက်​မှု​နှေး​ကွေး​နေတာကိုတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
1.TOTAL NAVAL ASSETS: 155
2.AIRCRAFT CARRIERS: 0
3. FRIGATES: 5
4. DESTROYERS: 0
5 . CORVETTES:3Small
6. SUBMARINES: 0
7. PATROL VESSELS: 65 Small graph icon
8.MINE WARFARE: 11
​ရေတပ်​အ​နေနဲ့တိုးတက်​မှုမှာ ​နှေး​ကွေး​နေ​သေး​သော်​လည်း​ကာချုပ်​ရဲ့ ​ပြောကြားချက်​အရ( 😅)လာမယ့်​၂၀၂၀နှစ်​ကုန်​ပိုင်းမှာ​ရေတပ်​ရဲ့ တိုးတက်​မှုစွမ်းပကားဟာမြင့်​တက်​လာနိုင်​ဖွယ်​ရာရှိပါတယ်​။
GFPဟာ သဘာဝအရင်းအမြစ်​ကို တွက်​ချက်​ရာမှာ စက်​သုံးဆီကို အရင်းအမြစ်​အဖြစ်​ထားပြီးတွက်​ချက်​ထားတယ်​။အ​ကြောင်းမှာ
စက်​သုံးဆီဟာ စစ်​ပွဲတစ်​ပွဲရဲ့ အဓိကကျတဲ့ ပင်​မ​သွေး​ကြောဖြစ်​လို့ပဲဖြစ်တယ်။
1. ဆီထုတ်​လုပ်​မှု​: 12,000 bbl/dy
2.သုံးစွဲမှုပမာဏ​: 28,120 bbl/dy
3.​မြေ​အောက်ရှိမ​သုံးစွဲရ​သေး​သောပမာဏ: 139,000,000 bblသဘာဝအရင်းအမြစ်​မှာ ထုတ်​လုပ်​မှုနဲ့ သုံးစွဲမှု အရမ်းကွာဟ​နေတာကို​တွေ့ရမှာပါ။
​မော်ေ​တ်ာကား​လမ်း: 34,377 km
မီးရထားလမ်း: 5,031 km
​လေယာဉ်​ကွင်း: 64 အခြား​ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျင်​​​​​ကုန်​သွယ်​မှုနည်းပါး​နေတာကို တွေ့မြင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
4. ဝယ်​လိုအားနှုန်း: $348,000,000,000
တိုင်းပြည်​ရဲ့ ဝင်​​ငွေ ကွာဟမှု များလာတယ်။GDPမှာ2018တွင်တိုးတတ်မှုနှုန်း 4.26ရှိနေရာမှ2019လက်ရှိအချိန်တွင် 2.41သာရှိသည့်အတွက် 1.85လျော့ကျနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
GNPနည်း​နေတယ်​။ အသားတင်​​ဝင်ေ​​ငွNIPAနည်းပါး​နေတယ်​။ သဘာဝထွက်​ကုန်​ဦးစား​ပေး​နေတယ့်​နိုင်​ငံအ​နေနဲ့ စီးပွား​ရေးဂယက်​ကို အရမ်းခံ​နေရတယ်​။super powerနိုင်​ငံကြီး​တွေရဲ့ ​လောင်းရိပ်​မိ​နေတယ်​။
တစ်​နိုင်​ငံအကျယ်​အဝန်း: 676,578 km
ကမ်းရိုးတန်း: 1,930 km
Share border: 6,522 km
ရေလမ်း​ကြောင်း: 12,800 km
အချုပ်​အားဖြင့်​ဆိုရ​သော်​ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​အ​နေနဲ့ ပြီးခဲ့သည့်​ နှစ်​များရဲ့ တိုးတက်​မှုများနှင့်​ နှိုင်းယှဉ်​လျှင် ​ခုနှစ်​၏2018ခုနှစ်​ရဲ့ rankingမှာpowerindexမှာ( 0.5991/0.0000)ဖြစ်​ပြီး ယခုနှစ်​ရဲ့ powerindexမှာ (0.6162/0.0000)ဖြစ်​ပြီးrankingသည်​ 37ကို​ရောက်​ရှိသွားပါတယ်။ အ​ခြေ​အ​နေပြ သ​င်္ကေတမှာ red arrowဖြစ်​ပါတယ်​။တိုးတက်​မှုနှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ်​။ (​နောက်​၁၀နိုင်​ငံဖြည့်​စွက်​ တွက်​ချက်​ခြင်းနဲ့ လည်း ဆိုင်​မယ်ထင်ပါတယ်)
Previous post ပဲခူးမှအမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်သို့ရောင်းစားခံရပြီး ကလေး (၄) ယောက်မွေးပေးရ၊ ခြေထောက်ရိုက်ချိုးခံရ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးချိုယွင်းလာမှ ပြန်လွတ်မြောက်လာ
Next post အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တရားခံပြေး ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကို ထိုင်းတွင်ဖမ်းမိပြီး မြန်မာသို့လွှဲပြောင်း